Isiraely: Noporofoin’ny manampahaizana Isiraeliana fa “sarotra ho an’ny ati-doha” ny teny Arabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2010 20:01 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Nederlands, Español, English
Nampitondraina ny lohateny hoe Nuerosychology: Anjerimanontolon'i Haifa (31 Aogositra 2010) Tsy mora ny mamaky ny teny Arabo araka ny navoakan'ny fikarohana momba ny atidoha ; ny fanadihadiana natao vao haingana izay notaterina tao amin'ny BBC sy tao amin'ny haino aman-jery hafa ao amin'ny aterineto, ary araka ny naseho tamin'ny gazetin'ny Fikambanana Ara-psikolojia Amerikana koa. (Tsy misy lahatsoratra hita amin'ny aterineto ). Manambara izy ireo ao anatin'izany fa manana porofo tamin'ny filazany fa sarotra kokoa ho an'ny atidoha ny mamaky ny teny Arabo noho ny mamaky ny teny Hebreo na Anglisy. Milaza ireo ekipan'ny mpikaroka fa ” ireo antsipirian'ny endri-tsoratra Arabo dia manery ny mpianatra hampiasa ny ilany ankavian'ny atidohan'izy ireo ihany ” ary ” herim-po very maina” ny fampiasana ny atidoha havanana rehefa mianatra mamaky ny teny Arabo .”
Olona 40 monja no nohadihadiana ary raha tokony hanontaniana raha tena sarotra vakiana marina ny teny Arabo na tsia dia tonga dia natao ho petra-kevitra ny hoe sarotra vakiana kokoa ny soratra Arabo.
Ny fototra niavian'ny tsikera
Notsongaina ary nanaovana adihevitra mahaliana tao amin'ny MyAnimeList, seha-pifaneraserana hiresahana ny sarimiaina Japoney ny lahatsoratra.
Mitsikera toy izao i RedSuisei, avy any Indonezia:
Miankina amin'ny hoe efa zatra amin'ny endritsoratra ve ianao sa tsia io. Tsy manana olana mihitsy aho amin'ny famakiana ny soratra Arabo. Afaka mamaky izany haingana koa aho. Angamba mety ho azo ampiharina amin'ny fomba fiteny hafa toy ny teny Japoney, Koreana, sns ihany koa ny zavatra nolazain'ireto mpikaroka ireto, fiteny izay tadiavina ny antsipiriany rehefa manoratra.
Hoy i Yammin avy any Londres :
Mora ny mamaky ny teny Arabo. Tena tsotra izany amin'izao fotoana izao. Mianatra ireo litera sy ireo zanatsoratra fotsiny; fitsipika vitsivitsy dia efa mahay ianao. Herinandro no nianarako namaky azy. Fa 8 taona aho tamin'ny nianatra izany, ary heveriko fa mora mahazo zavatra haingana angamba ny ankizy.
Milaza toy izao ny MorningGlory miainga avy amin'ireo tsikera avy amin'ny mpiserasera mikasika ny dikan’ ireo “zavatra hita” oharina amin'ny teny Aziatika :
NISY TENY SAROTRA NOHO NY KANJI VE???
鬮䯂龞麤 Mitovy amin'ny tariby mitondra herinaratra izy !!!
Manampy ny ohatra nomen'i MorningGlory , manome ity ohatra ity ihany koa i KyuuAL avy any Etazonia :
tadidiko tamin'izaho mbola ankizy. Nampianatra ny isa/laharana ny dadatoako. Tena haiko tsara izy ireo tamin'izany… fa adinoko ihany taty aoriana. .
Na izany na tsy izany, rehefa olon-dehibe aho, mbola miezaka foana ny mitadidy ny mahasamihafa ireto:
Litera roa fotsiny ihany ao amin'ny teny Japoney ireo (katakana).
Somary lavidavitra kely, miverina amin'ny fanoharany i RedSuisei :
Na inoanao na tsia, afaka milaza ny mitovy amin'izany ihany koa aho mikasika ny alfabetantsika. Jerena mitovy ny i sy j. Tena hita mitovy be mihitsy ny I sy ny l , indrindra rehefa atao sora-tanana. d mivadika ny b. mitovy amin'ny r ny n miaraka amin'ny tsipika mitohy lavalava kokoa midina. Tsipika iray ihany ny mahasamihafa ny F sy ny E. Ahitana litera saika mitovitovy fanoratra maro ihany koa amin'ny teny Japoney na hiragana izany na katakana na kanji. Na dia azo vakiana amin'ny fomba samihafa aza ireo litera mitovy. Na ny haben'ny litera ihany koa aza dia azo vakiana amin'ny fomba hafa (ohatra hoe tsu ny つ　ary famantarana ny renintsoratra miverin-droa kosa ny っ ).
Ao amin'ny teny fampidirana mampihomehy, manabaty i Confucius manao hoe :
Vakio ny matematika nataoko, ho hitanareo iza no sarotra kokoa …
Maneho ny heviny i Heika manao hoe :
Tsy mino aho hoe sarotra kokoa ahoana ny mianatra mamaky ny teny Arabo noho ny mianatra mamaky ny fomba fiteny hafa, indrindra rehefa mandinika ny fahasahiranako rehefa mamaky ny teny Japoney aho. Litera 28 fotsiny ny teny Arabo abjad, tsy sarotra ny mianatra azy. Araka ny nolazaina teo aloha, ny tena henjana indrindra dia ny fitadidiana ny tontolo isehoan'ireo endriky ny litera tsirairay ( mitokana, sora-baventy, afovoany na any amin'ny farany). Tsotra sy mora vakiana ny fomba fanoratra manara-penitra, raha mitovitovy ireo litera sasany, dia tena hafa mihitsy kosa ny fomba fanononana azy, noho izany dia mora ny manavaka azy ireo rehefa mampiasa azy .
Manoratra eo amin'ny pejin'ny seha-piseraserana samihafa PSPISO, mandray anjara toy izao i Alepman :
LOL……ny fanadihadiana nataon'ny anjerimanontolo isiraeliana, iza no mahalala fa mety hitan'izy ireo fa mety hitarika hanao amin'ny famonoan-tena ny mianatra ny teny Arabo. Eny, tsy fomba fiteny tsotra ny teny Arabo nefa tsy dia hoe tena sarotra akory ary iray amin'ireo fomba fiteny be mpampiasa eran-tany izy .
Mandinika mikasika ny seha-pifaneraserana Fortean Times izay manao hetsika mikasika ny lahatsoratra, milaza toy izao i Cultjunky (tsy misy rohy afaka omena ) :
Ny manahirana ahy eto dia misy maro ireo toerana tena saro-pady eran-tany, toerana ahitana ny Arabo sy ny Hebreo ‘mpiray vodirindrina’ ( ny tiako lazaina dia hoe amin'ny fomba mety hahavery izany, fa tsy amin'ny fomba efa lasa mampalahelo). Raha manohana ny lesona mikasika ny hoe mora kokoa ny teny Hebreo noho ny teny Arabo, ny fikarohana vao haingana natolotra tao amin'ny lahatsoratra, dia tsy ho ela intsony ny hahita amin'ny ho avy fa teny Hebreo tsy ahitana intsony ny teny Arabo no ampanarina. Maminavina aho eto fa amin'ny fiantombohan'izany dia mety ho lasa mahay mamaky teny tsara tsy ho ela ireo ankizy madinika, ka ho afaka ny hivoatra haingana, bla, bla, ary hanjary ho lasa nahita fianarana tsara, ary ho lasa hira ao amin'ny fampielezam-peo – ‘mahafaly kokoa mampamokatra’ [sic]
Raha milaza ianao hoe , ‘iza no hino ireo Isiraeliana ireo ‘, tsy hoe hino azy ireo no olana amin'izy ity, fa ny fahatokisana ireo antony nahatonga ity karazana fikarohana ity .
Ao amin'ny adihevitra hafa ao amin'ny Free Republic, milaza toy izao i gogogodzilla :
Hita tao amin'ny teny Hebreo ihany koa ny tsy fisian'ny zanatsoratra sy ny fomba fanoratana havanana miankavia.
Ary tena manahirana mafy tokoa an'ireo vaovao izany mianatra tsy misy zanatsoratra izany. Izany no nahatonga ahy nanajanona azy ka nianatra ny teny Koreana .
Izay manana ireo olany manokana ihany koa (toy ny fanipazana matetika ireo lazaina ao anatin'ireo fehezanteny , ka tsy fantatrao intsony izay resahiny /soratany mikasika izany ) .
Mitondra ity rakitsoratra avy amin'i CaucusWolf ihany koa ny seha-pifaneraserana fiadian-kevitra mikasika ny olana ao amin'ny How-to-learn-any-language.com
Tsy marina ho an'ny olona tsirairay ny fanadihadiana. Tena hitako tsotra tsara mihitsy ny mamaky ny teny Arabo. Afaka mamaky izany haingankaingana amin'ny fomba tsotra aho raha mbola fantatro ireo Voambolana. Mazava ho azy tsy ho haingana tahaka ny teny Anglisy fa nefa koa izy io tsy tenin-drazako .
Raha ny tena marina, mahatonga ireo litera Arabo sasany ho mora fantarina ireo tebola izay mampiavaka azy. Azo lazaina izany indrindra rehefa mampitaha azy amin'ny teny toa somary mitovy amin'y fa sarotra kokoa dia ny Alfabeta Latina .
Eo amin'ny rantsana mitokana ao amin'ny tranonkala iray ihany , mahita izao i Doitsujin :
IMHO, tsy sarotra mihitsy ny mianatra ny litera Arabo noho ny mianatra ny alfabeta tsy Latina, ohatra ny Sirilika [grika]. (Na izany na tsy izany, 28 litera fotsiny anie no ananan'ny teny Arabo e .) Ny fianarana ny mamaky ny litera Arabo no kely indrindra amin'ireo olana atrehan'ireo mpianatra ny teny Arabo .
Ary milaza toy izao i Arekkusu :
Mazava ho azy, anisan'ny anjara kely dia kely indrindra amin'ny fianarana fomba fiteny ny fianarana ny alfabeta, ka noho izany, tsy ilaina loatra ny manasarotra ny fianarana ny teny Arabo noho ny teny Hebreo .
Ireo rohy mankany amin'ireo Alfabeta
Ny Arabic العربية, afaka jerena ao amin'ireto rohy ireto ireo alfabeta Hebrew עברית, sy ireo hafa .
*Naotin'ny Mpilaza*: Mamaky ny teny Arabo misosa tsara ny mpanoratra, mahay tsara ny teny Sinoa Mandarin, ny teny Hebreo amin'ny ambaratonga fototra, ary ny alfabeta Romana (Anglisy, Espanola, Alemà, sns.) tenin-drazana. Tsy misy fahasamihafana misongadina mety ho hita eo amin'ny hasarotan'ny fianarana ny teny Hebreo sy ny teny Arabo .